Ankorondrano : Lehilahy maty nofaohan’ny fiara
Namono olona ny lalana vao avy nohavaozina eny Ankorondrano, ny sabotsy 11 jona teo, tamin’ny 8 ora alina.
Lehilahy nanapa-dalana tao anatin’ny faritra fiampitan’ny mpandeha an-tongotra teo akaikin’ny tobin-dasantsy Galana no nofaohan’ny fiara somary nirimorimo, ka tsy tafajanona. Maty avy hatrany teo no ho eo ilay lehilahy voadona.
Notanan’ny polisy natao famotorana, any amin’ny « violon » ilay mpamily. Tsy mbola nahenoam-peo kosa ny avy amin’ny fiankavian’ny niharam-boina.
Mbola eo am-panaovana famotorana mikasika ity raharaha ity ireo mpitandro ny filaminana misahana ny lozam-pifamoivoizana.